Mametaka voatabia voatabia, voatabia voatabia sachet - voatabia
"Zava-manta tsara indrindra hanaovana tsiro tsara indrindra!" Manana fanaraha-maso avo lenta amin'ny orinasa izahay
Fitaovana, Tin, Carton
Gulfood any Dubai, SIAL any France, Anuga amin'ny alemanina, Canton Fair sns
Ny «kalitao voalohany» no foto-kevitray foana hanodinana ny paty voatabia.
Procession ary manome tolotra kilasy voalohany ho an'ny mpanjifa amin'ny fanampiana ara-teknika matanjaka. Maniry ny hanitatra tsena marobe miaraka amin'ireo namana eto amin'izao tontolo izao izahay mba hananana ho avy mamiratra amin'ny fototry ny tombotsoan'ny fiaraha-mientana.
Amin'ny dingam-pamokarana, hanao asa fanaraha-maso rehetra izahay alohan'ny, mandritra sy aorian'ny famokarana, ary hiantoka fa afaka mankafy marina ny "kilasy" nampanantenainay ny mpanjifa.
Mametaka voatabia Rehefa ataontsika lasa tsiranoka matevina sy fitoviana matevina kokoa ny voatabia voatoto dia fantatra amin'ny hoe paty voatabia io endrika io. Azontsika ampiasaina ity ...
Inona no mahasamihafa ny lasa voatabia ...
Hebei Tomato dia namelabelatra ny hetsika fananganana vondrona lehibe indrindra tamin'ny taona 9 ka hatramin'ny 13 Aogositra 2019. Mba hampanan-karena ny fotoana malalaka an'ny mpiasa ...
Hebei Tomato 2019 vondrona fananganana acti ...